Umthandazo kuSanta Muerte wothando olungenakwenzeka. ? + Kuyasebenza
Umthandazo wokufa okungcwele ngenxa yothando olungenakwenzeka Ungaluphila olo thando ukuba ulufuna kakhulu okanye uzise umntu okhethekileyo oye washenxa kude ngenxa yesizathu esithile okanye kwenye.
Ungathemba ukuba le Ngcwele inezinto eziyimfuneko zokoyisa esikuthathela ingqalelo.
Unokunika ubomi kwiimvakalelo ezifileyo okanye azenze zivele kweyona ndawo yomileyo kunye nentliziyo eyomileyo.
1 Yintoni uMthandazo kuSanta Muerte wothando olungenakwenzeka?
1.1 Umthandazo wokufa okungcwele ngenxa yothando olungenakwenzeka
2 Ngaba lo mthandazo unamandla?
Yintoni uMthandazo kuSanta Muerte wothando olungenakwenzeka?
Las imithandazo Basebenzela nantoni na onqwenela ukuyi-odola.
Kule meko yenzelwe fumana uthando ngokufanelekileyo.
Umdali uThixo uBawo usifundisa ngezibhalo ezingcwele ukuba uzimisele ukunceda wonke umntu osondela kuye kwaye sinako ukusondela kuye ngomthandazo othe ngqo okanye kuyo nayiphi na ingcwele.
La Santa Muerte Siba lilungu lethu kwimicimbi yentliziyo neemvakalelo.
Iindlela azisebenzisayo ukusinika izicelo aziqondakali, kodwa ukuba ziyaziwa ukuba zinamandla amakhulu, ummangaliso wenzeka ngokukhawuleza nangempumelelo.
Umthandazo wokufa okungcwele ngenxa yothando olungenakwenzeka
Uthando lunkqonkqozile emnyango wam, kodwa othandekayo uSanta Muerte,
Uye waziphatha ngenkani naye, ndilahliwe kuba ndiyamthanda kwaye ayinguye.
Ukubandezeleka kokungabinamsebenzi kukundibamba xa ndibona ukuba andinaso isisombululo ezandleni ingxaki yam, ndiyakucela ndikhathazeke kakhulu ukuba uyawuva umthandazo wam, ndiyathemba ukuba umamele kwaye uve indlela endibetha ngayo xa intombi yam emhlophe iyathetha, Umntu endimthandayo luthando olungenakwenzeka kodwa ndifuna isimangaliso sokuba ambeke ecaleni lam ukuba kwenzeke, ukuba kunokwenzeka ukuba kungenxa yoko le nto ndiza kuwe, ukuba unobubele kwaye uyisimangaliso.
Ndifuna lo mntu abe liqabane lam kwaye abuyiselwe ngalo lonke uthando lwakhe, ndiya kubulela kuwe kwaye ngayo ndiyakholelwa okholwayo kwinkolelo yakho.
Ndizokucela ngexesha elifunekayo lokuba isicelo sam sizaliseke ngelixa ndilindile, ndiyakubonisa ukuthembeka kwam ngokunikezela ngeminikelo yam ixesha elide kuwe u-Usikelelekile oswelekileyo.
Owu, Mhlekazi oMhlophe, ndiyakuthembela kwaye ubeka lonke ukholo lwam kuwe, ndiyathemba ukuba uza kundimamela kwaye uzalisekise umnqweno wam. Makube njalo.
Oku umthandazo wothando USanta Muerte ungummangaliso!
Uthando kwaye lungaxolelwa Ngenye yeembandezelo ezinkulu ezibandezeleka kungekuphela nje namhlanje kodwa ukususela ekuqaleni kwexesha.
Amaxesha amaninzi sizithemba kakhulu ukuba izinto zilungile kwiqabane lethu kwaye siyamangala xa siphulukene nalo.
Okwalo mzuzu lo mthandazo uba sisixhobo sethu semfihlo esinokusinceda siphumelele idabi lothando olomeleleyo, oluyinyani nolubomi bonke.
Ewe, inamandla kakhulu, ngakumbi ukuba yenziwa ngokholo olusuka entliziyweni.
Ezinye zeengcebiso zokwenza esi sivakalisi sisebenze ngakumbi Yakha isibingelelo esikhethekileyo ekhayeni lethu apho sibabini Amakhandlela abomvu namhlophe, umhlophe ubomvu kunye kunye neefoto ezintathu zomntu omthandayo.
Ungabhala igama lomntu ecaleni kwelethu kunye nesivakalisi esifutshane kodwa eyona nto ibalulekileyo kukuhlala ukholwa.
Ngalo lonke ixesha kholwa kumandla omthandazo kwi-Holy Black Dead ngenxa yothando olungenakwenzeka.
Umthandazo onamandla wokundibiza